Parmanu – Page 3 – Filimside.net
Murqaaniga Bollywoodka John Abraham Oo Ka Hadlay Doorka Filmkiisa Parmanu!!
May 20, 2018 Ali Aadan
John Abraham ayaa sanadkaan la imaanaya mashruucisa dagaalka ah ee Parmanu-The Story of Pokhran kaaso la daawan doono 25 bishaan May. John waxuu ku guda jiraa xayeysiin u sameynta filmkiisa waxaana wax laga weydiyay mashruucan […]
John Abraham oo hadal heynta Bollywood-ka kula wareegay goos gooska Parmanu iyo fariinta uu Pakistan u diray (+Video)
John Abraham oo shirkada KriArj Entertainment dacwada xuquuqda filimka Parmanu kaga guuleestay ayaa soo bandhigay goos gooska mashruucaan oo si aan caadi aheyn looga helay. Filimka Parmanu waxaa hadda xuquuqdiisa maxkamada Mumbai u xukmisay shirkada John […]
Inaba caadi ma ahan John Abraham goos gooska kooban uu filimkiisa Parmanu kasoo bandhigay (+Video)
John Abraham ayaa si rasmi ah usoo bandhigay goos gooska kooban (Teaser) ee filimkiisa la wada sugaayo Parmanu – The Story of Pokhran. Filimka Parmanu ayaa ka hadlaayo sidii qarsoodida ahayd ee sanadii 1998 Hindiya dunida […]
John Abraham iyo shirkada Kriarj Entertainment oo dagaalkooda meel xun gaaray iyo filimka Parmanu oo la isku heesto
John Abraham iyo shirkada Kriarj Entertainment oo filimka Parmanu isla maal galinayaan ayaa isku dhaceen haatana mid walbo midka kale dacwad ayuu kusoo oogay sidoo kalena mustaqbalka filimkaan mugdi ayuu galay. Haddaba Prernaa Arora oo madax […]